Prasta Khabar-हेटौँडामा डेंगुका विरामी बढ्दो, यस्तो छ बच्ने उपाय
हेटौँडामा डेंगुका विरामी बढ्दो, यस्तो छ बच्ने उपाय
२३ साउन, हेटौँडा । पछिल्लो समय हेटौँडामा डेंगुको विरामी फेला पर्ने क्रम बढेको छ । हेटौँडा अस्पतालसहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा डेंगुका विरामी बढेका छन् । डेंगुबारे कम जानकारी हुँदा यसको प्रभाव बढिरहेको छ । त्यसैले डेंगुबारे केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
#के हो डेंगु ?
विश्वमा लामखुट्टेको टोकाईबाट अति नै शीघ्र फैलने भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग मध्येको रोग हो डेंगू। यो Flavivirus अन्तर्गत पर्ने Dengue virus नामको जिवाणुले गर्दा लाग्दछ । यो भाइरसको ४ वटा सेरोटाइप्स (DEN-1,2,3,4) जस अन्तर्गत थुप्रै जेनोटाइप्स छन् । विश्वभर नै यस रोगको फैलावट भए पनि एसिया खास गरी भारत र नेपालमा पछिल्लो समयमा यो रोग इन्डेमिक भएको छ ।
#कसरी लाग्छ डेंगु
एडिज इजीप्टाई जातको लामखुट्टेले डेंगु भएकालाई टोकेर अरुलाई टोकेमा यो रोग सर्दछ । पानी जम्ने ठाउँ, साना खाल्डाहरुमा सफा पानी धेरै दिनदेखि जमेर बसेको भए यस्त ठाउहरुमा यो लामखुट्टेले अण्डा पार्दछ । यो प्रजातिका लामखुट्टेले मुख्यत सफा जमेको पानिमा अण्डा पार्दछ र साझपख मानिसहरुलाइ टोक्ने गर्दछ। यो लामखुट्टेको खुट्टामा सेतो मार्किङहरु र ढाडको माथिल्लो भागमा वीणा आकारका मार्किङहरु रहेको हुन्छ​, जुन अरु प्रजातीका लामखुट्टेमा पाइदैन ।
#कसरी गरिन्छ परीक्षण ?
यसको परीक्षण गर्न बिरामीको रगत तथा सेरमको नमुना लिने गरिन्छ । विभिन्न कोषहरुमा कल्चर गरेर कीट​ तथा सेरोलोजिकल टेस्टहरु प्रयोगशालामा सजिलै रोगको पहिचान गर्न सकिन्छ ।यस रोगका लक्षणहरु देखिनासाथ तुरुन्तै अस्पताल गएर परीक्षण गर्नुपर्दछ​ । नेपालका सबै सरकारी अस्पतालमा यसको परीक्षण निशुल्क गरिन्छ ।
यौन सम्पर्क कम गर्ने महिलालाई रोग लाग्ने जोखिम बढी